Naphezu lokushisa antirecord kuleli hlobo e imaphakathi lizwe, ngempelasonto yokugcina namanje uyojatshuliswa abakhileyo inhlokodolobha sezulu esihle. Futhi labo bayizakhamuzi ezikahle, baye banquma ukuqhuba okhiqizwayo emoyeni opholile. Inzuzo ye ngempelasonto bezilokhu neze ayegcwele: Ibhola imfiva e buhlanjululwe eziningi emikhosini zomculo Culinary, kuhlanganise izinsuku ezimbili Bosco Fresh Fest.
Njalo festival ihlobo Bosco Fresh Fest ihlanganisa sonke acacile kakhulu futhi zamanje, okungukuthi emhlabeni umculo nezitayela, futhi uyawuthanda nokuyifunda nabantu izivakashi lomkhosi.
Kulo nyaka, endaweni umkhosi kanye nenani ukuzijabulisa izivakashi aye anda izikhathi eziningana, kodwa yayisalokhu bokuthi eyinhloko esimisweni umculo.
Kwaphela izinsuku ezimbili, izinkulungwane umkhosi izivakashi ovuthayo ngaphansi hits esishisayo abaculi 56 ezivela emhlabeni wonke non-stop. 5 izigaba, omunye ngemva komunye, kwakukhona izinkanyezi electronic, okunye futhi pop Parov Stelar futhi Sohn, AbaseBrithani esishisayo Morcheeba, futhi Sevdaliza, Roots Manuva, The Boxer Rebellion, u-Anton MS, iqembu "Bravo" futhi abasha, kodwa Vougal onesibindi . Juni 25 elikhanyayo umdanso isiphetho umculo ezivulekile mpelasonto sasingesihle ukusebenza kohlelo Headliner - emhlabeni wonke Dzhona Nyumana (Johane Newman), aye wawenzela abalandeli Russian angaphezu kweshumi nambili hits yabo, kuhlanganise incendiary Love me futhi Nginikeze ngothando lwakho, ngaphansi ezimi ku indawo kwaba cishe engenakwenzeka!
Nokho, omunye izinga umculo kuphela, umuntu wethu ungakwazi ungamangali. Futhi ngaphandle izinga yokuphila-esishintshashintshayo lomkhosi ngeke ibe ephelele. Nakuba abanye abantu ababehamba on ifa phakathi amakhefu phakathi ukusebenza abaculi, nabanye bafunda lolungenamaphutsa ukuchitha isikhathi uSeti futhi Riley. Ngo ukuphumula endaweni yabo ethokomele phakathi useyili abaningi kanye nabantu abasha serene ujabulele ukunambitheka mkhuba kanzima baphuze isiphuzo uSeti & Garage Riley sika, aphethwe wangempela igalaji ukudayiswa izinto eliyingqayizivele. Plates, izitika nezinye izinto eziningi ezithakazelisayo engathenga, ukuzuza amaphoyinti imincintiswano futhi kumnandi ehlobo interactive. Ngokwesibonelo, ukuba uhambe ukudoba futhi kukhishwe kuyo indondo oyifunayo phakathi amadada iraba ophuzi. Khona-ke umvuzo akuyona eside ukulinda.
Budebuduze igcwele utshani aluhlaza namaSoviet "isinkwa", omunye okusungulile cishe elihlakaniphile uSeti futhi Riley wathatha yokunambitha nokuphathelene baphuze uSeti & Riley sika Garage nge ukunambitheka lemon namanzi futhi okubabayo ginger Ukuthoma ngenhlanhla novelties kwesizini. Ilinde sako emugqeni, izivakashi isikhathi ukwenza selfie cishe brilliant nge eziningi art ukufaka futhi izinto, ukugcwalisa tape abangane zokuxhumana, ubuso babo bajabule.
Shaja amandla ehlobo kude Bosco Fresh Fest waya iqhaza komphakathi-imisinga, ne Blogger owaziwa kanye nabaholi bomphakathi, wazama entsha izinto Street ukudla, zize zithonye ngesikhathi ehlobo futhi uzama ukuthola izipho cool ngosizo we umshini wokudlala endaweni Tuborg Vula, musical kunayo brand ubhiya, imiklomelo imincintiswano eminingi nezimfuno, futhi-ke, waqhubeka ukukhanyisa ngaphansi hits ezishisa kakhulu zosuku nobusuku!